Xukumadda Oo Ka Hadashay Dagaal Ka Dhacay Gobolka Sh/Hoose
By Caalamka On Sep 13, 2019
Iska Hor imaad Sarkaal DF ka tirsanaa uu ku Geeriyooday
Inta la Xaqiiyay 6 Ruux ayaa ku dhimatay. Dagaal culus oo duleedka Magalada Marka ee xarunta Gobolka Shabeellaha Hoose ku dhexmaray. Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo Xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii Ciidamada Millateriga Soomaaliya. Gaar ahaan Guutada 14-ka Octooper ay fariisimo ka samaysteen duleedka Magaalada Marka. Waxaana halkaasi weerar ku soo qaaday Xubno ka tirsan Al-Shabaab sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka.
Joobjooge la hadlay saxafadda. Ayaa u sheegay in Ciidanka Dowlada lageeyay meel duleedka ka ah Magaalada Marka oo lagu wado in Sabtiga uu booqdo Raysul wasaaraha Xukumada Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo haatan ku sugan Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
“Marka waxaa imaanaya Raysul wasaare Kheyre. Waxaa Magaalada Ka socda qaban qaabada Soo dhaweynta. Ciidanka Dowlada Banaanka Magaalada ayaa loo saaray. Iyaga oo duleedka Magaalada Fariisimo ka samaysanaya waxaa soo weeray Al shabaab” ayuu yiri joob jooga hadlay saxafadda.
“Ciidanka oo dhufeesyo qodonaya ayaa la soo weeraray. Ciidanka Dowlada 4 askari ayaa ka dhimatay sidoo kale dhaawacyana waa jiraan. Al shabaab dhankooda khasaaro aa gaaray aan maqlay qofna ma xaqiiji karto. Balse Qof ka dhaawacmay Al shabaab Ciidanka Dowlada ayaa soo qaaday waxaana lagu daawaynaa Xerada AMISOM ee Marka” ayuu hadalkiisa sii raaciyay
Wararkii ugu dambeeyay ee saakay aan ka heleymo Magalada Marka iyo duleedkeeda ayaa waxaa ay sheegayaan in xaaladu ay tahay mid degan. Hayeeshee Ciidamada Dowladda Soomaaliya ay wadaan howlgallo kala duwan oo Amniga lagu xaqiijinayo.
Mana jirto wax war oo ka soo baxay dhinacyada dagaalamay oo ay ugu hadlayaan dagaalka Xalay ka dhacay duleedka Marka oo Cabsi badan ku abuuray dadka deegaanka maadaama ay maqlayeen dhawaqa Madaafiicda la isku adeegsano.
Si kastaba. Weerarkan ayaa ku soo beegmaya xili maalinimada beri oo Sabti ah lagu wado inuu Ra’iisul Wasaare Khayre gaaro magaaalada Marko ee xarunta gobolka Sh.Hoose, halkaasoo la suray boorar ay ku xardhan yihiin Sawirrada Khayre.